Hesekiel 42 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
42 Afei ɔde me fii adi+ faa atifi fam+ baa akyi hɔ adiwo hɔ. Na ɔde me baa adidibea+ a ɛwɔ baabi a atew ne ho+ no anim, ɔdan a ɛwɔ atifi fam no anim no. 2 Ɔfã a ne ntwemu yɛ basafa ɔha no anim na atifi kwan no da, na ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa aduonum. 3 Mfinimfini hɔ adiwo+ no fã a ɛyɛ basafa aduonu no anim ne akyi adiwo no abo nsɛwee+ no anim na adan a ɛtoa so abiɛsa no abrannaa+ a ɛne wɔn ho di nhwɛanim no wɔ. 4 Na ɔkwan bi da adidibea no anim a ne tɛtrɛtɛ yɛ basafa du wɔ fie no mu,+ ne ɔkwan foforo basafa biako. Na apon no ano kyerɛ atifi fam. 5 Adidibea a ɛwɔ soro no mu susua, efisɛ abrannaa a ɛda ɔdan no anim no sõ sen ase ne mfinimfini de no. 6 Adan no toa so abiɛsa,+ na enni adum te sɛ adiwo adum no. Ne saa nti, na wɔatwe adan a ɛwɔ soro no kɔ akyi sen ase ne mfinimfini de no. 7 Ná wɔde abo ato ɔfasu wɔ akyi hɔ a ɛbɛn adidibea a ɛkyerɛ akyi hɔ adiwo no, na na ɛwɔ adidibea foforo no anim. Na ne ntwemu yɛ basafa aduonum. 8 Adidibea a ɛkyerɛ akyi hɔ adiwo no ntwemu yɛ basafa aduonum, na nea ɛkyerɛ asɔrefie no yɛ basafa ɔha. 9 Sɛ obi fi akyi hɔ adiwo hɔ reba adidibea hɔ a, ɔbɛfa ɔkwan a ɛwɔ ase hɔ no so, wɔ apuei fam. 10 Ná adidibea+ wowɔ adiwo no ho fasu a ɛkyerɛ apuei fam no, ne tɛtrɛtɛ mu, baabi a atew ne ho+ ne ɔdan no anim. 11 Ná ɔkwan bi da anim te sɛ nea ɛwɔ adidibea a ɛkyerɛ atifi fam+ ho no, na ne nyinaa ntwemu ne ne tɛtrɛtɛ yɛ pɛ; baabi a wɔfa fi adi ne ne nsusuwso ne n’akwan nyinaa sesɛ. 12 Sɛnea adidibea no kwan a ɛkyerɛ anafo fam te no, saa ara na ɔkwan a ɛda ɔfasu a ɛkyerɛ apuei fam ho no te, ɔkwan a wɔfa so ba mu no.+ 13 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Adidibea a ɛwɔ atifi ne adidibea a ɛwɔ anafo a ɛkyerɛ baabi a atew ne ho+ no yɛ adidibea kronkron. Ɛhɔ na asɔfo a wɔba Yehowa anim+ no di akronkronne mu ade kronkron no.+ Na ɛhɔ na wɔde akronkronne mu ade kronkron ne nneɛma a wɔde bɛbɔ aduan afɔre ne bɔne ho afɔre ne asodi afɔre no gu, efisɛ ɛhɔ yɛ kronkron.+ 14 Na sɛ asɔfo no ba mu a, wɔremfi kronkronbea hɔ nkɔ akyi hɔ adiwo hɔ, mmom wɔde wɔn ntade a wɔde som+ no begu hɔ, efisɛ ɛyɛ kronkron. Na sɛ wɔne nnipa no wɔ nkitahodi bi a, wɔbɛhyɛ ntade foforo+ akɔ wɔn nkyɛn.” 15 Afei bere a osusuw fie a ɛwɔ mfinimfini no wiei no, ɔde me faa ɔpon a anim kyerɛ apuei+ fam no mu fii adi, na osusuw ɛhɔ nyinaa. 16 Ɔde demmire susuw apuei fam. Osusuw hɔ nyinaa hyiae, na na ɛyɛ demmire+ ahanum. 17 Bere a ɔde demmire susuw atifi fam no, onyaa ahanum wɔ ho nyinaa. 18 Osusuw anafo fam no, onyaa demmire ahanum. 19 Afei ɔkɔɔ atɔe fam de demmire kosusuwii, na onyaa ahanum. 20 Osusuw afã anan no nyinaa, na na ɔfasu atwa ho nyinaa ahyia;+ ne ntwemu, demmire ahanum, na ne tɛtrɛtɛ nso demmire ahanum.+ Ɛkyɛɛ nea ɛyɛ kronkron ne nea ɛnyɛ kronkron no mu.+